'Nikiakiaka' namoaka sary mpamono vaovao vaovao fotsiny eo am-piandrasana ny teaser - iHorror
Home Vaovao Mahafaly Fialam-boly 'Nikiakiaka' namoaka sary vitsivitsy momba ilay mpamono olona vaovao eo am-piandrasana ilay mpampianatra
'Nikiakiaka' namoaka sary vitsivitsy momba ilay mpamono olona vaovao eo am-piandrasana ilay mpampianatra
Hiverina avy hatrany aho ...
by Trey Hilburn III Oktobra 11, 2021 11,441 hevitra
Ny fahadimy niantsoantso amin'ny franchise dia manakaiky kokoa ny famotsorana. Ary, akaiky kokoa ny tranofiara mpampihomehy izahay ho an'ilay horonantsary izay tokony hidina mandritra ity herinandro ity. Mba hitazomana ny hanoanana sy hanairana ny filàn'ny tahotra dia manana sary vitsivitsy avy amin'ireo olona mahafinaritra izahay EW.
Ny sary dia mampahafantatra antsika ireo mpilalao malaza ary koa ny sarangan'olona vaovao. Mazava ho azy fa misy koa fitifirana mangatsiatsiaka be Ghostface miafina ao amin'ny lalantsara iray. Tiako manokana ilay zazalahy ratsy, Kyle Gallner miaraka amin'ny tsorakazony mafana. Izy io dia natao tanteraka hanipy ny hoe iza no barometa mpamono. Izy dia manana fijerena Skeet Ulrich tena aminy, noho izany dia tsy maintsy izy no mpiompy mena. Tsy lavo amin'izany aho.
Miaraka amin'ireo sary sy afisy vaovao, ny làlan-kazo vaovao, “Olona fantatrao foana izany”. Tsipika mampihoron-koditra tokoa satria izany indrindra no lazain'ny polisy amin'ilay niharam-boina rehefa nahavita heloka bevava. Noho izany, ny olona fantatsika no mandratra antsika. Ny vahiny dia tsy manome eff.
Ireo mpilalao kilasika dia mazava ho azy fa efa antitra ankehitriny, saingy tena tsara tarehy daholo. David Arquette dia manana an'io amboahaolo fotsy io, zaddy vibe mandeha amin'ny endriny vaovao.
Ahoana ny hevitrao momba ireo sary vaovao avy amin'ny Scream? Ampahafantaro anay amin'ny pejinay Facebook na Twitter.
Ny kiakiaka dia miparitaka any amin'ny sinema amin'ny 14 Janoary 2022.
Bola: Nahazoana tombana amin'ny sary Paramount
Bola: Brownie Harris / Paramount Pictures